Budada Ceritinib (LDK378) - Soo saaraha Warshad Soo saare
/ Products / Kansarka anti / Ceritinib (LDK378)
Ceritinib Powder waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo bukaanada qaba kansarka sanbabada ee unugyada yar-yar (NSCLC) kuwaas oo kufilan anaplastic lymphoma kinase (ALK) oo burooyinkoodana ay socdaan ama aan u dulqaadan karin Crotinib (crizotinib).
Product Name Budada Ceritinib (LDK378)
Formula kelli C28H36CIN5O3S
Miisaanka Nooca 558.135
Isku mid ahaanshaha LDK-378;
Ceritinib (LDK378) BudadaDescription
Budada Ceritinib waxaa loo isticmaalaa daaweynta bukaanka qaba kansarka qanjirka 'anaplastic tumor-positive' (ALK +) kansarka sanbabada ee unugyada yar-yar (NSCLC) oo ka sii daray ama aan u dulqaadan karin crizotinib ka dib daaweynta crizotinib.
Dib-u-habeynta koromosoomyada ee ku lug leh qanjirka 'anmplastic lymphoma kinase' (ALK) oo ah darawal ka soo baxa oncogenic ayaa si fiican u beddelay daaweynta kansarka sanbabada ee unugyada yaryar. Tobankii sano ee la soo dhaafay, daawooyinka la bartilmaameedsaday waxay u muuqdeen istiraatiijiyad shaqsiyeed oo hufan oo loogu talagalay ALK-dib-u-habeyn loogu sameeyay kansarka sanbabada ee unugyada yar-yar. Ansixinta degdega ah ee ka hortagayaasha ALK ee xoogga leh, sida crizotinib iyo budada dhowaan loo yaqaan 'ceritinib (LDK378) budada ah, oo ku saleysan tijaabada wajiga I / II ee si wanaagsan loo qorsheeyay ayaa ah guul taariikhi ah oo ku saabsan baaritaanka kansarka bukaan socodka waxayna gacan ka geysaneysaa xilli cusub oo daaweyn oncogenic ah oo lagu garto Naqshadaynta tijaabada caafimaadka. budada loo yaqaan 'ceritinib budada' si ay u noqoto bedel xoogan oo loo yaqaan 'crizotinib' ee loogu talagalay ALK-dib-u-habeyn kansarka sanbabada ee unugyada yar-yar ayaa sidoo kale la soo bandhigay.
Budada Ceritinib (LDK378) Mashruuca Hawlaha
Budada Ceritinib waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo bukaanada qaba kansarka sanbabada ee unugyada yar-yar (NSCLC) kuwaas oo kufilan anaplastic lymphoma kinase (ALK) oo burooyinkoodana ay sii socdaan ama u dulqaadan karin Crotinib (crizotinib).
Budada Ceritinib waa xulasho oo awood u leh xakameynta xinjirowga 'lymphoma kinase' (ALK). Jir-dhiska caadiga ah, ALK wuxuu u shaqeeyaa sidii tallaabo muhiim ah u ah horumarinta iyo shaqada unugyada habka neerfaha. Si kastaba ha noqotee, beddelka koromosoomyada iyo isugeynta waxay keenaysaa qaab nooc ka mid ah kansarka 'ALK' kaas oo ku lug lahaa horumarka NSCLC. Budada Ceritinib ayaa sidaas u dhaqanta si loo joojiyo enzyme-kan isbeddelay isla markaana joojiso faafitaanka unugyada, ugu dambeyntiina joojiso horumarka kansarka. Sababtoo ah budada loo yaqaan 'ceritinib budada' waxaa loo tixgeliyaa daaweynta kansarka la bartilmaameedsaday, baaritaanka FDA-ansaxisay ayaa loo baahan yahay si loo go'aamiyo bukaanada u tartamaya budada ceritinib. Tijaabadan, oo ay soo saartay Roche, waa VENTANA ALK (D5F3) CDx Assay waxaana loo isticmaalaa in lagu aqoonsado bukaanada ALK-positive ee NSCLC ee ka faa’iideysan doona daaweynta budada ceritinib.
Ceritinib (LDK378) Budada Codsiga
Budada 'Ceritinib budada' waa anaplastic lymphoma kinase (ALK) - xakameyn wax ku ool ah oo asal ahaan loo isticmaalo daaweynta metastatic NSCLC.Previous, waxaa kaliya loogu talagalay bukaanada soo saaray u adkeysiga crizotinib, kale oo ka hortag ah ALK-positive, laakiin tan iyo markii la kordhiyay isticmaalkiisa. inay u adeegto sidii ikhtiyaarka koowaad ee metastatic NSCLC.
Ceritinib (LDK378) Budada Waxyeelada & Digniinta
Dhibaatooyinka daran ee halista ah waxaa ka mid ah sumowga caloosha, cagaarshowga, cudurada sanbabada ee dhexda, cudurka dheeriga ah ee QT, hyperglycemia, bradycardia, iyo pancreatitis.
Dhibaatooyinka ugu badan ee la soo sheegay waxay ahaayeen shuban, lallabbo, enzymes beerka oo sareeya, matag, calool xanuun, daal, rabitaanka cuntada oo yaraada, iyo calool fadhi. Khatarta loo qabo enzymes-ka beerka oo sareeya, baaritaanada shaqada beerka waa in la sameeyaa labadii toddobaadba mar 9-ka toddobaad ee ugu horreeya daaweynta.
Ugu dambeyntiina, budada loo yaqaan 'ceritinib budada' labaduba waa kaabis iyo xoog wax ka qabta enzyme-ka CYP3A4, marka daawooyinka waa in si taxaddar leh loola socdaa oo la falgeli kara budada ceritinib.
Sidoo kale wac dhakhtarkaaga markiiba haddii aad isku aragto:
Diarrhea shuban daran;
▪ madax xanuun, jahwareer, isbeddel ku dhaca xaaladda maskaxeed, aragga oo yaraada, suuxdin (gariir);
▪ kaadi yar ama aan lahayn;
Bleeding dhiigbax aan caadi ahayn (sanka oo dhiig ka yimaado, dhiiga caadada oo culus), ama dhiig kale oo aan joogsan doonin;
▪ astaamaha dhiig-baxa caloosha –saxaro dhiig leh ama saxara daahsan, qufacid dhiig ama matag u eg qaxwaha;
Problems dhibaatooyinka wadnaha - xanuunka laabta, xanuunka daankaaga ama garabkaaga, barar, miisaanka oo kordha, dareemid neefta oo gaabata;
▪ calaamadaha xinjirowga dhiigga – kabuubis lama filaan ah ama daciifnimo, dhibaatooyin xagga aragtida ama hadalka ah;
Problems dhibaatooyinka beerka - kaadida madow, saxaro midabkeedu dhoobo yahay, cagaarshow (maqaarka ama indhaha oo huruud noqda);
Calcium heerka kaalshiyamka oo hooseeya - murqaha ama foosha, kabuubyo ama dareen jilicsan (afkaaga, ama farahaaga iyo lugahaaga);
Pressure cadaadiska dhiigga oo kordhay – madax xanuun daran, aragga oo xumaada, qoorta ama dhegaha oo kaa garaaca, walaac, sanka oo sanka ka dareera.
Daaweyntaada kansarka waa la daahi karaa ama waa la joojin karaa haddii aad leedahay waxyeelooyin qaarkood.
 “Zykadia (budada ceritinib) Kaabsulka, Isticmaalka Afka. Macluumaad Qoraal Buuxa ah "(PDF). Shirkadda Daawooyinka ee Novartis. Raadin 14 February 2017.
 “Magacyada Caalamiga ah ee Aan Khaaska ahayn ee Maaddooyinka Dawooyinka (INN). Waxaa lagugula talinayaa Magacyada Caalamiga ah ee Aan Laheyn: Liiska 71 ”(PDF). Hay'ada Caafimaadka Aduunka. 2014. p. 79. La helay 14 Febraayo 2017
 "FDA Waxay Ansixineysaa budada Ceritinib ee loogu talagalay kansarka sanbabada ee loo yaqaan 'ALK-Positive Lung Cancer'. Medscape. Abriil 29, 2014.
 "Qorista xogta" (PDF). www.pharma.us.novartis.com. Dib loo soo ceshay 2019-06-12.
 "FDA Waxay Kordhisaa Oggolaanshaha budada Ceritinib ee Kansarka Sambabka". Machadka Kansarka Qaranka. 27 Juunyo 2017.